Nagu saabsan - Sanhe Great Import Import and Export Trade Co., Ltd.
Sanhe Great Wall Import and Export Trade Co., Ltd waxaa la aasaasay 2012.
Shirkaddu waxay ku taal inta u dhexeysa Beijing iyo Tianjin, oo qiyaastii 40 kiiloomitir u jirta Madaarka Beijing. Mawqifka juquraafi ahaan waa mid gaar ah, goobta ayaa ka sareysa gaadiidkuna waa ku habboon yahay.
Waxaan xaq u leenahay dhoofinta badeecadaha waxaanan leenahay 8 sano oo horumar iyo khibrad soo saaris ah. Loo dhoofiyo in kabadan 10 wadan, sida United Kingdom, Sweden, France, Poland, Russia, America, Brazil, Chile, Uruguay, Australia, South Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, India iyo wixii la mid ah.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarnay waa daahyada xargaha ee 'PVC strip', xaashiyaha jilicsan ee PVC, Xaashida Rubber ee tayada sare leh, sida xaashida caag Silicone ah, warqadda caagga ah ee loo yaqaan 'Viton (FKM), warqadda caagga ah ee xumbada leh, Rubber Hose iyo gogosha sagxadda ee ka hortagga ah.
Haddii aad haysato wax soo saar cusub oo aad soo iibsato, waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa inaad suuqa ka raadiso, waxay kaa caawin doontaa inaad waqti iyo tamarba uhesho inaad ka raadiso Shiinaha.
Haddii aad haysato alaabooyin kale oo ka imanaya alaab-qeybiyeyaal kale oo aad ku wada rarayso alaabteenna hal konteenar, si weyn ayaannu kuu la kaashan doonnaa oo waxaannu kula soo xidhiidhi doonnaa alaab-qeybiyeyaasha kale si togan.
WAA MAXAY UJEEDDEENA
Waxaan marwalba diyaar u nahay inaan siino alaab kafiican iyo adeegyo kafiican macmiil kasta. Qanacsanaantaadu waa raadintayada ugu weyn. Anaguna waxaan horeyba ugu soconay inaan rumeyno riyadeena.
Waxaan haynaa falsafad maareyn heer-koowaad ah, shaqaale tayo sare leh, la-hawlgalayaal wax soo saar tayo leh, tayo wanaagsan iyo kalsooni, waxay ku siin doonaan daacadnimo iyo aaminaad, qiimo lacag layaab! Sanhe Great Wall Import and Export Trade Co., Ltd waa lamaanahaaga lagu kalsoonaan karo weligiis. Isticmaalka alaabtayada ayaa kaa dhigi doonta qanacsanaan!
1.High tayo leh
5.Good adeegga iibka kadib